Yeremia 26 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Wɔde owu hunahunaa Yeremia (1-15)
Wɔannya ankum Yeremia (16-19)
Wɔkaa Mika nkɔmhyɛ mu nsɛm (18)
Odiyifo Uriya (20-24)
26 Yuda hene Yehoiakim+ a ɔyɛ Yosia ba no ahenni mfiase no, asɛm yi fi Yehowa hɔ bae sɛ: 2 “Nea Yehowa aka ni, ‘Kogyina Yehowa fi adiwo, na Yuda nkurow mufo a wɔba Yehowa fi bɛsom* wɔ hɔ no nyinaa, ka nsɛm a mɛhyɛ wo no nyinaa fa wɔn ho.* Nea mɛka akyerɛ wo biara, ka kyerɛ wɔn; nyi asɛm baako mpo mfi mu. 3 Ebia wobetie ama obiara atwe ne ho afi ne kwammɔne ho, na mmusu a wɔn nneyɛe bɔne nti mabɔ me tirim sɛ mede bɛba wɔn so no, mɛsesa m’adwene.*+ 4 Ka kyerɛ wɔn sɛ: “Nea Yehowa aka ni, ‘Sɛ moantie me, na moanni me mmara* a mede ama mo no so, 5 na moantie me nkoa adiyifo a mesoma wɔn ba mo nkyɛn mpɛn pii* nanso muntie wɔn no a,+ 6 ɛnde me nso, mɛyɛ ofi yi sɛ Silo,+ na mɛma kurow yi ayɛ nnome ama asaase so aman nyinaa.’”’”+ 7 Na asɔfo ne adiyifo ne ɔman no nyinaa tee sɛ Yeremia reka nsɛm yi wɔ Yehowa fi hɔ.+ 8 Enti bere a Yeremia kaa nsɛm no nyinaa wiei, sɛnea Yehowa kae sɛ ɔnka nkyerɛ ɔman no nyinaa no, asɔfo ne adiyifo ne ɔman no nyinaa bɛkyeree no, na wɔkae sɛ: “Owu na wubewu. 9 Adɛn nti na wode Yehowa din ahyɛ nkɔm sɛ, ‘Ofi yi bɛyɛ sɛ Silo, na kurow yi bɛsɛe pasaa a obiara rentena mu bio’?” Na ɔman no nyinaa betwaa Yeremia ho hyiae wɔ Yehowa fi hɔ. 10 Bere a Yuda mpanyimfo no tee nsɛm yi no, wofi ɔhene no fi* baa Yehowa fi hɔ, na wɔbɛtenatenaa ase wɔ Yehowa pon foforo no ano.+ 11 Na asɔfo ne adiyifo no ka kyerɛɛ mpanyimfo ne ɔman no nyinaa sɛ: “Ɛsɛ sɛ wobu ɔbarima yi fɔ na wokum no,+ efisɛ wahyɛ nkɔm atia kurow yi sɛnea mo ara moate wɔ mo asom no.”+ 12 Ɛnna Yeremia ka kyerɛɛ mpanyimfo no nyinaa ne ɔman no nyinaa sɛ: “Yehowa na ɔsomaa me sɛ menhyɛ nkɔm ntia ofi yi ne kurow yi, na menka nsɛm a motee no nyinaa.+ 13 Enti afei, monyɛ mo akwan ne mo nneyɛe yiye, na muntie Yehowa mo Nyankopɔn asɛm, na mmusu a Yehowa aka sɛ ɔde bɛba mo so no, ɔbɛsesa n’adwene.*+ 14 Na me de, mewɔ mo nsam. Nea eye na ɛteɛ wɔ mo ani so biara no, momfa nyɛ me. 15 Nanso monkae nhu sɛ, sɛ mukum me a, mogya a edi bem na mode begu mo so, ne kurow yi so, ne emufo so, efisɛ ampa ara, Yehowa na ɔsomaa me baa mo nkyɛn sɛ memmɛka nsɛm yi nyinaa nkyerɛ mo.” 16 Ɛnna mpanyimfo no ne ɔman no nyinaa ka kyerɛɛ asɔfo ne adiyifo no sɛ: “Ɛnsɛ sɛ wobu ɔbarima yi fɔ na wokum no, efisɛ Yehowa, yɛn Nyankopɔn din mu na ɔkasa kyerɛɛ yɛn.” 17 Bio nso, asaase no so mpanyimfo no bi sɔree, na wɔka kyerɛɛ nnipa a wɔabɔ gua no nyinaa sɛ: 18 “Mika+ a ofi Moreset hyɛɛ nkɔm wɔ Yuda hene Hesekia bere so,+ na ɔka kyerɛɛ Yudafo nyinaa sɛ: ‘Nea asafo Yehowa aka ni: “Wobefuntum Sion sɛ afusaase,Yerusalem bɛyɛ abo akuwakuw,+Na Ofi no bepɔw* no bɛyɛ sɛ kwae mu nkoko.”’+ 19 “Yuda hene Hesekia ne Yudafo nyinaa kum no anaa? So wansuro Yehowa, na wampa Yehowa kyɛw sɛ onhu wɔn mmɔbɔ,* na mmusu a Yehowa kae sɛ ɔde bɛba wɔn so no, wansesa n’adwene anaa?*+ Enti anhwɛ a, yɛde mmusu kɛse bɛba yɛn* so. 20 “Ɔbarima bi nso tenaa ase a ɔhyɛɛ nkɔm wɔ Yehowa din mu. Ɔno ne Semaia ba Uriya a ofi Kiriat-Yearim.+ Ɔno nso kaa nsɛm te sɛ Yeremia nsɛm no de hyɛɛ nkɔm tiaa kurow yi ne asaase yi. 21 Na Ɔhene Yehoiakim+ ne ne mmarima a wonim ko yiye nyinaa ne mpanyimfo no nyinaa tee ne nsɛm no, na na ɔhene no repɛ no akum no.+ Bere a Uriya tee no, ɛhɔ ara na ehu kaa no, na oguan kɔɔ Egypt. 22 Ɛnna Ɔhene Yehoiakim somaa Akbor ba Elnatan+ ne mmarima foforo kaa ne ho kɔɔ Egypt. 23 Na wɔkɔfaa Uriya fii Egypt, na wɔde no kɔmaa Ɔhene Yehoiakim. Ɛnna ɔde sekan kum no,+ na ɔtow ne funu kyenee ɔmanfo amusiei.” 24 Na Safan+ ba Ahikam+ di boaa Yeremia, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔremfa no mma nkurɔfo no mma wonkum no.+
^ Anaa “bɛkotow.”
^ Anaa “ka nsɛm a mɛhyɛ wo no nyinaa kyerɛ wɔn.”
^ Anaa “m’akwankyerɛ.”
^ Nt., “mesɔre soma wɔn da biara anɔpatutuutu.”
^ Anaa “obenu ne ho.”
^ Anaa “asɔrefi no bepɔw.”
^ Anaa “odwudwoo Yehowa bo.”